Ko USB-C inozopedzisira yasvika kumadivosi eIOS? | IPhone nhau
Isu tanga tichitaura nezve USB-C kwenguva yakareba, dhata yekuchinjisa data iyo Apple pachayo yanga ichida kuwedzera, ndokuti, pasina kuibvisa kubva kune anotakurika desktop zvigadzirwa. Iyo Cupertino kambani inoramba ichizeza kuwedzera iyi mhando yekubatanidza kune ayo nhare mbozha. Icho chikonzero, kana iwe uchiziva iyo Cupertino kambani kwechinguva, iwe unogona kuwana zano. Zvinenge zvichinyatso kuvhura iyo sisitimu yekuisa faira kuendesa uye kuwana kwemuviri nekushomeka kana kusatombo kudzora, tisingataure zvishongedzo pamusoro izvo zvaunogona kurasikirwa zvizere kutonga. Nekudaro, USB-C ine zvakawanda maficha izvo pamwe Apple isingakwanise kufuratira. Nekuti Isu tinozvibvunza pachedu: Ko USB-C inozosvika kune zvishandiso zveIOS?
Saka, ngatione kuti ndeapi zvikonzero Apple ingashandise, kunyangwe ichisarudza kuwedzera iyo USB-C kubatanidza kana kana ikafunga kuramba ichitsigira iyo Mheni tambo seyone chete mukana wekuwana kune iOS zvishandiso.
1 Zvikonzero zveMheni
2 Zvikonzero zve USB-C
The waya Mheni yakauya pamberi: Muna 2012 iyo iPhone 5 yakavhurwa uye pamwe nayo kwakauya mheni yekubatanidza, kanomwe nekukurumidza kupfuura yapfuura. Sechinhu chayo chikuru, yakanga isina kana kubatana kumwe, yaigona kuve yakabatana kubva kudivi rega, yakatarisana neiyo microUSB nenzvimbo yayo yakasarudzika.
Inobvumira nhepfenyuro odhiyo nevhidhiyoKunyangwe isiri mumhando imwechete inoitwa neUS-C, iyo Mheni EarPods muenzaniso.
Chiyero chekuchengetedza. Nekuda kwetambo iyi, Apple inova nechokwadi chekuti zvishandiso zvemanyepo, zvinokuvadza kuchinhu, uye pamusoro pazvose, kuwanikwa kwemuviri hakuzoshandisirwe kubaya iyo iOS chishandiso.
Apple yaizotadza kudzora zvishongedzoIzvi zvinoreva kuti zvingave zvisingakwanisike kuti vashandisi vaone kuti ndedzipi dzadzo ndedzechokwadi kugadzira kana kwete. Kuderedza hunhu hwezvinhu zvakanyanya, uye nekudaro kurasikirwa nechinangwa cheMFi certification.
Zvikonzero zve USB-C
Iyo USB-C kunyange ine rutsigiro rweApple, uye iyo MacBook yakasvika mune yayo yekutanga uye yakavandudzwa vhezheni ine imwechete data kubatanidza, uye yaive iyo USB-C, nekuti mukuwedzera mukuchinjisa mifananidzo uye yakachena data, isu tinokwanisa kurodha mudziyo kuburikidza nayo nenzira kwayo, kutonhora kuuraya kunakidza kubatana seMicrosoftSafe. Iyo coup de nyasha yakagamuchirwa neMacBook Pro pakupera kwegore rapfuura, chimwe chishandiso chine chete USB-C kubatana, kutaura zvakanaka kune zvakakurumbira uye zvinodikanwa zvakadai seHDMI uye SD kadhi kuverenga. Muchidimbu, kuonekana kwakaziviswa asi pamwe kwakatarisira. Nekudaro, mune iyo iOS panorama zvese zvinongedzera kune yakapesana nedivi, Apple inoramba, iyo iPhone 7 haina kusanganisira USB-C, uye zvese zvinonongedzera kuchokwadi chekuti Samsung's Galaxy S8 ichaita. Chii chakanyanya kunaka nezve USB-C pane iyo iPhone?
Tinogona kuchaja iyo iPhone kubva chero kupi. Uye ndizvozvo USB-C kana yafarirwa ichatibvumidza kuchaja iyo iPhone kumba kweshamwari dzedu uye shamwari dzinoshandisa zvishandiso zveApple, semuenzaniso, chimwe chinhu chakaomarara kune vashandisi veIOS avo vagara vachitsamira pamatare avo.
Ichadzikisa mitengo yetambo. Quality Mheni inodhura, hausi kuzowana yakanaka uye MFi yepasi pematanhatu euros. USB-C inonyanya kugadzirwa uye isingadhuri kugadzirwa, kunyangwe kubva kune anozivikanwa mabrandi.
USB-C inobvumira nhepfenyuro odhiyo uye vhidhiyo mune yakakwira tsananguro.
Iwo materevhizheni uye monitors ezveramangwana anochinjiswa kune USB-C seyokupinza nekuburitsa chinongedzo chezvinhu zvekuteerera, izvo zvaizotibvumidza kubatanidza iyo iPhone isina vamiriri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Ko USB-C inozopedzisira yasvika kumadivosi eOS?
6 euros inodhura?
Pindura José Ignacio
apuro ichipesana nenyika, zvagara zvakadaro, uye zvicharamba zvakadaro ... Ini ndinobheja muhoro wemwedzi kuti iphone 8 haizotakure usb mhando C ... Yekupedzisira macbook yakaisa USB mhando C nekuti ndizvo chaizvo izvo zvino zvisingashandiswe nemunhu, haha… Ndeipi laptop yakashata, haugone kubatanidza yakajairwa usb, tambo yehmmi, kana SD kadhi…. panzvimbo pekushanduka tinodzokera kumashure ...
Bluetooth mahedhifoni, asiri ma AirPod asi anogona kukugutsa